MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: 2014
တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုအတွက် တိုးတက်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့် တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့ရတာလဲ။ တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့ရတဲ့ အဓိက ရေသောက်မြစ်ပြဿနာကတော့ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က တရားမျှတမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မပြုတာကြောင့်ပါ။ တရားမျှတမှုကို လက်ခံလိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့ ဆိုတာကတော့ ဝေးပါသေးတယ်။ တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့ရတဲ့ နောက်ထပ်တချက်ကတော့ ကိုယ့်ဖက်က အမြဲတန်း အသာရလိုမှု အနိုင်ရလိုမှုတွေကြောင့် တရားမျှတမှုကို မျက်ကွယ်ပြုရာကနေ နောက်ဆုံးတော့ လုပ်ချင်ရာလုပ် ကိုယ်မရှုံးရင် ပြီးစတမ်းဆိုတဲ့ အခြေကို ဆိုက်တော့တာပါပဲ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:40 AM No comments:
နှိမ်နင်းရေးလက်နက်ဖြင့် ၃ နေရာတွင် ၁၅ ချက် ပစ်ခတ်ခဲ့ဟု အစုိုးရပုိုင်သတင်းစာ ဖော်ပြ
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းမှာ ရဲက ပစ်ခတ်လို့ ဒေသခံ ရွာသူ ဒေါ်ခင်ဝင်း သေဆုံးမှု အတွက် ဒီကနေ့ထုတ် အစုိုးရပုိုင် သတင်းစာတွေမှာ စီမံကိန်းအတွက် ခြံစည်းရုံးတုိုးချဲ့ ကာရံရေး လုပ်ဆောင်နေမှုတွေ တားဆီးနှောင့်ယှက် ခံရတယ်ဆုိုပြီး ဖော်ပြ လာပါတယ်။
ခြံစည်းရုိုး ကာဖုို့ အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ ခွဲလုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာ လိပ်ခွံတောင်ကြားမှာ ဒေသခံရွာသားတွေ လေးခွတွေနဲ့ အနီးကပ် ပစ်ခတ်လုို့ အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေး လက်နက် ၁၂ ဗုို့ ပြောင်းချောသေနတ်နဲ့ ၃ ချက် ပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လုို့ ဆုိုပါတယ်။
မြန်မာဝန်ကြီးများအား စနစ်တကျ ဆုံးမရန် ကျနော် စဉ်းစားသည် ကျနော် ခရီးသွားရင်းဖြင့် အတွေးတစ်ခု ရုတ်တရက် ၀င်လာသည် မြန်မာ ၀န်ကြီး များ အတော်ပင် နာမည်းဆိုးခဲ့ကြပြီး ယခုတွင်လည်း နာမည်ဆိုးနှင့် အားလုံးနီးပါး ကျော်ကြားကြသည်။ ထိုနာမည်ဆိုးများကို အများ နားလည်နိုင်သော နာမည်ကောင်းများအဖြစ် ၄င်းတို့ ပြောင်းလဲလာကြရန် ကျနော် မမျှောင်လင့်သော်လည်း ၄င်းတို့နားကို အပ်ကြီးတစ်ချောင်းအဖြစ် ထွင်းဖေါက် ရန် ကျနော် ဆန္ဒရှိခဲ့၏…သို့ကြောင့် ကျနော်ရေးရပြီ……………
မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်တွင် ချင်းတွင်းနယ်မြေမှ ဘုန်းကြီးလူထွက် ၂ ဦးတို့ ကောင်းစားခဲ့ကြသည်။
နည်းနည်းနောနော နယ်နယ်ရရ ကောင်းစားခဲ့ကြသည် မဟုတ်ဘဲ နေပြည်တော်တွင် ထိပ်တန်းဖြစ်သော မင်းကြီးရာထူးများ ရှိ ခဲ့ကြ၏။
ကာချုပ်၊ ဦးရွှေမန်း၊ ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ သမ္မတဖြစ်နိုင်ခြေစစ်တမ်း – လင်းထိုက်(Y.I.T)
၅၉(စ) မပြင်နိုင်ရင် NLD ပါတီ အမတ်နေရာ အများစု ၂၀၁၅ မှာ လွှတ်တော်ထဲ ရောက် လာနိုင်ပေမယ့် NLD ပါတီအတွက် ဒုတိယခေါင်းဆောင်နေရာေ၀၀ါးနေမှုကြောင့် သမ္မတေ နရာ ရွေးချယ်မှု အကျပ်အတည်း ပေါ်ပေါက်နိုင်သလို လက်ရှိ အာဏာပိုင်တွေ ဘက်မှာလည်း သမ္မတလောင်း တင်မြှောက်ရေးအတွက် အရေးတကြီး ခေါင်းချင်းရိုက်နေကြမှာ ဧကန်မလွဲပါ . . .
မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်းဒေသနေ အရပ်သားတွေ ကို အစိုးရတပ်က သတ်ဖြတ်ညှဉ်း ဆဲရာမှာ တာဝန် အရှိဆုံး စစ်ဗိုလ်သုံးဦးရဲ့ အမည်ကို Harvard Law School လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို၊ အထူးစစ်ဆင်ရေး ဗျူရိုက စစ်ဦးစီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်ဦးနဲ့ နေပြည်တော်ရဲ့  တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အေး တို့ကို ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူ အဖြစ် ဖော်ပြပါတယ်။ ၂၀၀၆ က ၂၀၀၈ အထိ မြန်မာပြည်အရှေ့ ပိုင်း စစ်ဆင်ရေးမှာ အရပ်သား အများအပြားကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှု မှာ တာဝန်ရှိကြောင်း (၇၈) မျက်နှာ အစီရင်ခံစာ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာပြည် အရှေ့ ပိုင်းမှာ ကွင်းဆင်းလေ့လာ စုံစမ်းပြီး ရေးသားထား တဲ့ အစီရင်ခံစာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:39 PM No comments:
တိုင်းပြည် တွင်း တည်ငြိမ်အေး ချမ်းမှု မရှိပါက တပ်မတော်က အာဏာပြန် သိမ်းမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ် ကြီးဟောင်း၊ ပြည်ထောင် စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဦးတင်အေး က ပြောဆို လိုက်ရာ ယင်းပြောဆိုမှု သည် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ တဦး အနေဖြင့် မပြော ဆိုသင့်သော စကားဖြစ်ပြီး ပြည်သူ ကို ခြိမ်းခြောက်မှု တရပ် ဖြစ်သော ကြောင့် ရှုတ်ချကြောင်း နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင်များ က ပြောဆိုလိုက်ကြသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:33 AM No comments:
လွှတ်တော်အတွင်း စစ်တပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အာဏာပြန်မသိမ်းဖြစ်ရန် ပါဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ် မအေးချမ်းပါက စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ပြောကြား
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရုပ်ရှင်ဂီတ အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲ၌ အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဝေယံဖြိုးဦး)
လွှတ်တော်အတွင်း စစ်တပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အာဏာပြန်မသိမ်းရန် ပါဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ် မအေးချမ်းပါက စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းရ မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင် စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က ပြောကြားသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:59 PM No comments:
ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှုအပေါ် ဧရာဝတီ၏ သဘောထား ကြေညာချက်
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ထွက်ရှိသော ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနပိုင် သတင်းစာများ၌ ပါရှိသော သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာချက် အတိုင်း မိမိတို့၏ အပတ်စဉ် မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော ဂျာနယ်နှင့် လစဉ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော မဂ္ဂဇင်းတို့၏ အမှတ်တံဆိပ် The Irrawaddy ကို မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက် ထုတ်ဝေသွားမည် ဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:46 AM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:35 AM No comments:
မြန်မာ့လွှတ်တော် အဆောင်အယောင်နှင့် နိုင်ငံရေး အုပ်စုများ
လွှတ်တော် အစည်းအဝေး တခုတွင် အတိုက် အခံပါတီ မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်မေးခဲ့သည့် တခု တည်းသော မေးခွန်းမှာ သူ့ခေါင်းပေါင်းကို ချွတ်ထား ခွင့်ပြုဖို့ ဖြစ်သည်။ ခေါင်းပေါင်းက သူ့ကို ခေါင်းကိုက်စေပြီး ဆံပင်များကို လည်း ကျွတ်စေသည်ဟု သူကဆို၏။ ဟာသဆန်ဆန် ပမာမခန့်လုပ် တတ်ခြင်းကြောင့် လူသိများသည့် အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ် ဦးဝင်းထိန်က ကျီစယ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလည်း ပယ်ချခဲ့ပါသည်။
အခု တလော ပြည် တွင်း မြို့ရပ်ပေါ်က အော်သံ ခန ငြိမ်ကျနေ တယ် မထင်ပါနဲ့ ဗုဒ္ဓဘားကို ဖမ်းသွားတာ အနောက်က ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဦးအောင်သောင်းတို့ သားအဖတွေ ပိုင်ကြတဲ့ United Amara Bank အထိနာသွားတယ် သိပ်များများတော့မဟုတ်ပါ…..သိန်း (ကိုးထောင် တိတိ) ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးရဲ့ သားကြီးကို ၅ ရာနုန်းနဲ့ ထုတ်ချေးထားပေးတာ ၂၀၁၁ ကလို့ ဆိုပါတယ် …
တူမောင်ညို – လွှတ်တော် ဝဋ်ဆင်းရဲမှာ ဇွတ်ဆွဲပြီး မနေကြပါနဲ့
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာလ ၁၃၊ ၂၀၁၄
အတိုက်အခံများ အတွက် လွှတ်တော် တွင်းနိုင်ငံရေးကား လမ်း ဆုံးနေချေပြီ၊ ရှေ့ခရီးဘယ် လိုဆက်ကြမလဲ။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်စဉ် က ချမှတ်ခဲ့တဲ့ “တာဝန်ကြီး ၃ ရပ်” (ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်း ချမ်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင် ဆင်ရေး) ကို လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသလဲ။ ထိရောက်တဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှု ဘာတွေရရှိခဲ့သလဲဆိုတာ ဒီချုပ်ပါတီနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ ဆန်းစစ်ရရှိလာတဲ့အချက်တွေကို ပြည်သူအများသိရှိအောင်တင်ပြအစီရင်ခံသင့်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:36 PM No comments:
မကြာသေးခင်ကမှ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ၂၀၁၅ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဥပဒေမူကြမ်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စစ်ရေး ဆက်ဆံမှု အပိုင်းမှာ အပြောင်းအလဲ တချို့ ပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက ဝေဖန် လိုက်ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နောက်ပြန် ဆုတ်နေတဲ့ ကာလမှာ အမေရိကန် အစိုးရနဲ့ မြန်မာအကြီးအကဲတွေကြား မှားယွင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မအင်ကြင်းနိုင်က အသေးစိတ်ပြောပြမှာပါ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:32 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:27 PM No comments:
ပြည်ထောင်စု ကြံ ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက တင်သွင်းပြီး ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် ၁၂ ပွင့် ဆိုင်လို အများ ပါဝင်ဆွေးနွေး မည့် ဗန်းပြ ဆွေးနွေး ပွဲမျိုး မလိုလားကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောကြား လိုက်သည်။
ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် နှစ်ရက်တာ စတင်ကျင်းပသည့် ပထမအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီ စတုထ္တအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယခုလို ပြောဆိုသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:52 PM No comments:
ရဟတ် ယာဉ်သံ ကြားသည်နှင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တံဆိပ်ပါ စက္ကူအလံလေးများ ကိုင်ဆောင်ထားသော လူအုပ်ကြီးက လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်သွားသည်။ ၅ မိနစ်ခန့် အကြာတွင် ကောင်းကင်ယံမှ ရဟတ်ယာဉ်တစင်းက ရွာဘေးတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းထဲသို့ တအိအိ ဆင်းသက်လာသည်။
ခဏအကြာတွင် ရဟတ်ယာဉ်ဆီမှ ကားတန်းတခု ထွက်ခွာလာပြီး ဒေသခံများ စောင့်မျှော်နေကြသည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှာ ကားတစီးနောက်ခန်းတွင် လက်ပြရင်း လိုက်ပါလာသည်။ ကလေးသူငယ်များ၊ အထက်တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အပါအဝင် ဒေသခံအများအပြားက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ စက္ကူအလံလေးများ ဝှေ့ယမ်းလျက်၊ အနည်းငယ်သော လူတချို့ကလည်း သမ္မတ၏ ဓာတ်ပုံဖြင့် ထုတ်ဝေထားသည့် ပြက္ခဒိန်များကို ကိုင်ဆောင်ပြသလျက် ၄င်းတို့ ကျုံကူးနယ်သား သမ္မတကို ကြိုဆိုနေကြသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:01 PM No comments:
အားလုံး သိကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်ဟာခြောက်ပွင့်ဆိုင် အစား ၁၂ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ အဆိုတစ်ရပ်ကို မဲခွဲဆုံးဖြတ် အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်မှာ ဒီအဆို အတည်ပြုလိုက်နိုင်တာဟာ ဘာ အဓိပ္ပာယ် ဆောင်ပါသလဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီထဲက အကွဲအပြဲပြဿနာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လွင်လာပြီလို့ ကောက်ချက်ချနိုင်မ လား၊ ရှေ့ဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာဆွေးနွေး ကြည့် ကြရအောင်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:39 AM No comments:
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်လာတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အစိုးရက ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို လျှော့ချပေးတဲ့အပြင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လည်း ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သလို ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:13 AM No comments:
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က တောင်းဆိုထားတဲ့ ခြောက်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လက်ခံမယ်၊ လက်မခံဘူး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဘက်က အကြောင်းပြန်ကြားမှု မရှိသေးခင် အခုတစ်ခါ ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော် ဘက်က ၁၂ ပွင့်ဆိုင်လုပ်ပါဆိုပြီး တောင်းဆိုမှု တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာပြန်ပါပြီ။ ကျင်းပနေဆဲ တိုင်းလွှတ် တော်အထူး အစည်းအဝေးမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးစောထွန်းအောင်မြင့် ပင်မတိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေပါ ပါဝင်တဲ့ ၁၂ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ပေးဖို့ အရေးကြီး အဆိုတင်ပြီး တောင်းဆို လိုက်တာပါ။ ဒီအဆိုကို လွှတ်တော်တွင်းဆက်ပြီး ဆွေးနွေးကြပါဦးမယ်။ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကိစ္စ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ပါ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:24 AM No comments:
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်သည် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနှင့် တက်လာသည့် စစ်တပ် ကျောထောက် နောက်ခံပြု အစိုးရဖြစ်သည်။ အစိုးရသစ်ဆိုသော စကားရပ်သည် ၁၅ လသာသာ ကျန်တော့သည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအတွက် အသစ်မဟုတ်တော့ ဘဲ ဟောင်းလာပြီဟုပင် ပြော၍ရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:23 AM No comments:
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင် တဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ဖို့ လက်မှတ်ရေး ထိုးတောင်းဆိုခဲ့ သူ ဗိုလ်မှူး ကျော်စွာဝင်း ကို ပြင်ဦးလွင် စစ်တရားရုံး က ဒီကနေ့ ထောင်ဒဏ်၂ နှစ် ချမှတ်လိုက် ပါတယ်။
ဒီနေ့ ပြင်ဦးလွင် ကနေ မန္တလေး အိုးဘိုထောင်ရှေ့ အရောက်မှာ RFA ကမေးမြန်းစဉ် သူဟာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ တာကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံ ရတာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောပါ တယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:42 PM No comments:
မြန်မာ မြေမြှုပ်မိုင်း ဆက်လက်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲဟု ဆို
မြန်မာ နဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တွေ မြေမြှုပ်မိုင်း ကို ဆက်လက် သုံးစွဲနေတာ ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ တယ်လို့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ မှာ မိုင်းတားဆီးရေး လုပ်ဆောင်နေ တဲ့ နိုင်ငံ တကာ မြေမြှုပ်မိုင်း တားဆီးရေး အဖွဲ့ (အိုင်စီဘီအယ်လ်) က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ အတွင်း အသုံးပြုခဲ့ တာဖြစ်ပြီး မြန်မာ ကတော့ မြေမြှုပ်မိုင်း အသစ်တွေ အသုံးပြုတာ ကတော့ သိသိသာသာ ကျဆင်း လာတယ်ဆို့ ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 11:16 AM No comments:
နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် သတင်းအခြေအမြစ်များကို စိစစ်အတည်ပြုပြီးမှ ပြောဆိုရန်လိုအပ်ဟု အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက် နိုင်ငံရေးပါတီများ တုံ့ပြန်
အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်နေသည့် အချိန်ကာလဖြစ်သည့်အလျောက် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် သတင်းအခြေအမြစ်များကို စိစစ်အတည်ပြုပြီးမှပြောဆိုရန်နှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း အလေးထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့၏ ဒီဇင်ဘာ ၄ရက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အား နိုင်ငံရေးပါတီများက တုံ့ပြန်ပြောကြားသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:22 AM No comments:
ဆယ်တန်းအောင် ဖို့မလို၊ လူလိုသိဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့စကား မကြာခဏ ကြားရပါတယ်။
ဆယ်တန်းလေး အောင်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ကာလမှာ လူလိုသိဖို့က ပို၍ပို၍ အရေးကြီးကြောင်း၊ လူ့ကျင့်ဝတ် နားလည်ဖို့၊ ကိုယ်ချင်းစာဖို့ အရေးကြီးကြောင်း အသားပေးပြောဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။
မြန်မာပြည်ကို နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ဝန်းကျင် စိုးမိုးသွားတဲ့ ယခင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေက ဆယ်တန်းအောင်ပါသလား။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:11 PM No comments:
မိုးလုံးပြည့် မုသားဝါဒီများကို လူထု အားနဲ့ အန်တုပါ
(သည်လေဒီးစ် နယူးစ် ဂျာနယ်) ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄
ရွှေပြည်ကြီး ပြောင်းလဲနေတယ် ဆိုတာတော့ မယုံမရှိကြပါနဲ့ အမှန်ပါပဲ။ တချိန်က “VOA လိမ်နေသည်”၊ “မိုးလုံးပြည့် မုသားဝါဒီများ တိုင်းပြည်ပျက်အောင် လုပ်နေသည်”၊ နေ့ည မပြတ် အော်ခဲ့သူများ အခု VOA ကနေပဲ တဆင့် စကားတွေ ပြောခဲ့ပါပြီ။ ပြောခဲ့တာကလည်း တချိန်က သူတို့ စွပ်စွဲခဲ့သလို မုသားဝါဒ၊ အလိမ်၊ အညာ၊ ကလိမ်ကကျစ်၊ ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲမှုတွေ အပြည့်ပါပဲ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:03 PM No comments:
ပစိဖိတ်ဒေသ ရှိ အမေရိကန် တပ်များ၏ အကြီး အကဲ ဖြစ်လာရန် အဆိုပြုရွေး ချယ်ခံထား ရသူ ရေတပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟာရီ ဟဲရစ် ဂျူနီယာ (Harry Harris Jr) က အမေရိကန် စစ်တပ် အနေဖြင့် စစ်တပ်ကြီးစိုးမှု ရှိနေသော မြန် မာနိုင်ငံနှင့် စစ်ရေး အရ ဆက် ဆံမှု ပြုလုပ်ရန် အချိန်မကျသေးဟု ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုကြောင်း အေပီ သတင်း တပုဒ်တွင် ရေးသား ထားသည်။
အမေရိကန်ရေ တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟာရီ ဟဲရစ် ဂျူနီယာက အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော်၏ ရာထူးခန့် ထားရေးဆိုင်ရာ ကြားနာမှု အတွင်း အထက်ပါ အတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြောဆို ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစားပေး ဆောင် ရွက်နေသော အမေရိကန်အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့် သိသိသာသာ ကွဲပြားခြားနေ သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:02 PM No comments:
အင်အားကြီး နိုင်ငံများ၏ ဖိအားပေး ဆက်ဆံမှု လက်မခံဟု ကာချုပ်ပြော
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပြည်တွင်းရေး တွင် အင်အားကြီးနိုင်ငံ များ၏ ဖိအားပေး ဆက်ဆံမှုကို လက်မခံကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဦးစီး ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Sengnuan Saiyalath နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သော လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Sengnuan Saiyalathနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ နေပြည်တော်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အခြား နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးအား ဝင်ရောက် စွက်ဖက် ခြင်း မပြုသကဲ့သို့ မိမိနိုင်ငံ အရေးအား ပြည်ပမှ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်းကို လက်မခံကြောင်း၊ အင်အားကြီး နိုင်ငံများက အင်အားငယ် နိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံကြီးမှ နိုင်ငံငယ် အပေါ် ဖိအားပေး ဆက်ဆံမှုကိုလည်း လက်မခံ ပါကြောင်း ပြောဆိုသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:19 PM No comments:
ဆင်းရဲတွင်း ပိုနက်အောင် လမ်းပြဆောင်ပါမည်
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:18 PM No comments:
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးအောင်သောင်း ကို အမေရိကန် က အမည်ပျက် စာရင်း သွင်းလိုက် တာကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြတဲ့ပွဲမှာ ပါဝင် သူတွေ ဒံပေါက် လု ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ခဲ့တာ ကို လူတချို့ အွန်လိုင်း လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများမှာ ရယ် သွမ်းသွေးနေကြ တာ မြင် ရတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိ တယ်။ တကယ်တော့ ဒီ ဖြစ်ရပ် ဟာ တိုင်းပြည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဆီဦးထောပတ် ကို လူ့မလိုင် ကပ်ပါး လူတစု က စားသုံးခွင့် ရနေခြင်း ပြယုဂ်ပါ။ နိုင်ငံရဲ့ လူအများစု အငတ် ထုကြီး ခံစားနေရ တဲ့ အဖြစ်သနစ် မြင်ကွင်း အသေးစား တခုပါ။ ပြက်ရယ်ပြု စရာ မဟုတ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်က လာရောက်ခဲ့သော အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် လုံးဝပြီးစီးခြင်း မရှိသေးဘဲ မူလအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးစကား ပြောကြားခဲ့သည်။
သူ၏လေသံသည် ယခင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ခရီးစဉ်တုန်းကထက် စိတ်အားထက်သန်မှု နည်းနေသည်ကို သိသာစွာ ဖော်ပြနေသည်။ မကြာသေးခင်က ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုထားသော သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အယောင်ဆောင်အရပ်သားအစိုးရသည် ရာစုနှစ်ဝက်နီးပါး စစ်အုပ်ချုပ်မှု တစ်ခန်းရပ်ပြီးနောက် လစ်ဘရယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် အချက်ပြနေသည်ဟု ထိုစဉ်က ထင်ခဲ့ရသည်။
တပ်မတော်၏ ထိန်းချုပ်ခံခေတ် ပြောင်းချိန်တန်ပြီ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် တွင်း ယခုအပတ် အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးကြရာ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ် များက အတိုက်အခံ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စား လှယ် များ အား ဦးတည်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မည့် အရေး တားဆီးထားသော ပုဒ်မ ၅၉ (စ) နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အခရာကျသော ပုဒ်မ ၄၃၆ မပြင်ဆင်လိုကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုပြီး အကယ်၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါက မြန်မာနိုင်ငံ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားမည်ဟု သတိပေးခြင်းသည် အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်က ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်မည်ဆိုသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ အသိပေးခြင်းပင်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:54 AM No comments:
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး NLD နဲ့ စစ်တပ်အမတ်တွေ လွှတ်တော်မှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီ
စစ်အစိုးရ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ကစလို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်းမှာ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီး၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ စိတ်အား ထက်သန်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) နဲ့ အခြေခံ ဥပဒေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် မယ်လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေ လွှတ်တော်မှာ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:08 PM No comments:
နိုင်ငံတော် လူဆိုးတွေကို အတိုက်ခံဘက်က ချော့ပြီးပေါင်းသင့် မသင့်
နအဖခေတ် ၀န်ကြီးဟောင်းနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီရဲ့ ထိပ် တန်းခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်သောင်းကို အမေရိကန်က အစိုးရက နာမည်ပျက် စာရင်း သွင်းမှုအပေါ် ကန့် ကွက်ကြောင်း နေပြည်တော် လွှတ်တော်က နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ တညီတညွတ် တည်း ဆုံးဖြတ်လိုက် သည် ဆိုတဲ့သတင်းက အတော် လူပြောများခဲ့ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:09 AM No comments:
စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်မှ ထွက်သွားရေး
လွှတ်တော်တွေထဲ စစ်အရာရှိတွေ ထိုင်နေတယ်။
တခါတလေ သူတို့ ထပြီး စကားပြောတယ်။
ရုံးသုံးအခေါ်က တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်။
အရပ်အခေါ်က စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်၊ တမတ်သား ကိုယ်စားလှယ်၊ မိုးကျရွှေကိုယ် စသဖြင့်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:00 AM No comments:
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မထားရန် လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး
အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေး ရာမှာ တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို လွှတ်တော်မှာ မထား ဘဲ ကာ ကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးပိုင်းမှာ တာဝန်ပေး ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ တယ်လို့ ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မဲ ဆန္ဒနယ်က ဒေါ်ဇာတလဲမ်း က ပြောပါတယ်။
စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်းကို တာဝန်ခံရန် လိုပြီ
၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ကရင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်ပွဲများအတွင်း မြန်မာ အစိုးရတပ်က လူမဆန်သည့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဥပဒေကျောင်းမှ အစီရင်ခံစာ တစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အဓိကတာဝန်ရှိသူများမှာ လက်ရှိ တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများဖြစ်သည့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို၊ အထူးစစ် ဆင်ရေး အဖွဲ့မှူး(ကစထ) ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦး၊ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာန ချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အေးတို့ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:21 PM No comments:
ဦးအောင်သောင်းအား အမေရိကန် အစိုးရက နာမည်ပျက်စာရင်း တင်သွင်းမှု လွှတ်တော်ကန့်ကွက်
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းကို အမေရိကန် အစိုးရက နာမည်ပျက်စာရင်း ထည့်သွင်းခြင်းကို နိုဝင်ဘာ ၁၀ရက် ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်လိုက်သည်။
မင်္ဂလာဒုံမဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဝင်းက အမေရိကန်၏ ဦးအောင်သောင်းအပေါ် အမည်ပျက်စာရင်း ထည့်သွင်းမှုကို ရှုံ့ချရန် အရေးကြီးအဆို တင်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိ လွှတ်တော်၌ အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:55 PM No comments:
နေပြည်တော် တွင် အပူတပြင်း လုပ်ဆောင် ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲ ကို နိုင်ငံရေး ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၊ အဓိ ကခေါင်းဆောင် များ ဆွေးနွေးပွဲဟု ခေါ်ဆိုကြ ရာ အခေါ်အဝေါ်ကစပြီး မှားနေသည်ဟု ဝေဖန် ပါရစေ။ နိုင်ငံရေးထိပ်သီးများ ဆိုသည်မှာ Political heavy weight များ ပါသော ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ရမည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲမှ တဆင့် တိုင်းပြည်တွင် သေရေးရှင်ရေး ရင် ဆိုင်နေရသော အကြောင်းအရာများ ကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာခြင်း ဟု နားလည်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာပြည်တွင် ဒီလို မဖြစ်ခဲ့ပါ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:58 PM No comments:
ဦးအောင်သောင်းကိစ္စ NLD လက်ချက် မကင်းဟု ကြံ့ခိုင်ရေး ဦးလှဆွေ စွပ်စွဲ
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ် သည့် စက်မှု ၁ ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်း ကို အမေရိကန် အစိုးရက နာမည်ပျက် စာရင်းသွင်း လိုက်ခြင်းသည် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ လှုပ်ရှားမှုများ အပေါ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နှင့် အမေရိကန် အစိုးရ ပေါင်းပြီး ညစ် ပတ်ခြင်းဟု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ၀င် အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးလှဆွေက စွပ်စွဲပြောဆို လိုက်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:18 AM No comments:
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ဘာကြောင့် ငြင်းပယ်နေရသလဲ
ထက်မြက်4November 2014
စစ် အာဏာရှင်များ သည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ပီပီ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲများကို စစ်ရေး အမြင်ဖြင့်သာ ကြည့်၏။ ယခုမိမိတို့ အခြေအနေမှာ ခိုင်မာတောင့် တင်း နေသောကြောင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရန် မလိုပေ … သူတို့အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရေးကို အခြေခံပြီး မည်သူနှင့်မဆို တွေ့ဆုံ ချင်မှ တွေ့ဆုံပေမည်။ ထိုမဟာဗျူဟာမှာ ဗိုလ်သန်းရွှေ ချမှတ်ခဲ့သော မဟာဗျူဟာ ဖြစ်လေသည် . . . ~~~~~~...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:16 AM No comments:
“ဥပဒေက တပ်မတော်ကို မြေသိမ်းဖို့ အတွက် ခွင့်ပြုမထား”
လက်ရှိ အချိန်အထိ နိုင်ငံ အနှံ့တွင် မြေယာ သိမ်းဆည်းမှု ပြဿနာ အများ အပြား ရှိနေ ဆဲ ဖြစ်သည်။ တပ်မတော် ကလည်း မြေယာ သိမ်းဆည်း မှုများ ရှိနေသည်။ တချို့ သိမ်း ဆည်းမြေယာ များသည်လည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းခွင် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွား သည် ကို တွေ့မြင်နေ ရသည်။
ဥပဒေကြောင်း အရ လယ်ယာမြေများကို တပ်မတော် က သိမ်းဆည်း ခွင့် ရှိ/မရှိ၊ သိမ်း ဆည်းမြေများ ကို မူလပိုင်ရှင်များ သို့ ပြန်လည် ပေးအပ်ရာ တွင် စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းချက်များ၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် သပိတ် စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြလျက်ရှိသည့် သင်္ဃန်းကျွန်း မိကျောင်းကန် မြေသိမ်းမှု စသည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီ မြန်မာ ပိုင်း ကော်ပီ အယ်ဒီတာ နိုင်စွမ်းက ရန်ကုန် အခြေစိုက် ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူနှင့် မကြာသေးခင်က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံ့အရေး ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့် အိုဘားမား ဖုန်းဖြင့်ဆွေးနွေး
အမေရိ ကန် ပြည်ထောင် စု သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ် စကားပြောခဲ့တယ် လို့ အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော် က ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အိုဘားမားတို့ တယ်လီဖုန်းကနေတဆင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဓမ္မဝါဒ တပ်​မတော် ကျင့်သုံးတုန်းလား
သ တင်း​ထောက်​ ကို​အောင်​​ကျော်​နိုင် ​ကို မြန်​မာစစ်​တပ်​က ထိန်းသိမ်း ထားစဉ်​ ကာလမှာ ပစ်​သတ်​ လိုက်​တဲ့ သတင်းက​တော့ ​ကြောက်​စရာ​ကောင်းပြီး ဒီနိုင်​ငံ ထဲက ဂျာနယ်​လစ်​ တိုင်း အတွက်​ တကယ့်​ကို စိုးရိမ်​စရာ ကိစ္စ တခုဖြစ်​ပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်​မှာ လူသိရှင်​ကြား ထုတ်​ပြန်​ခဲ့တဲ့ ဒီ​ကြောက်လန့် ဖွယ်​ဖြစ်​ရပ်​ က​နေ တဆင့်​ စစ်​တပ်​ဟာ တရား လက်​မဲ့ သတ်​ဖြတ်​မှု​တွေ ကို ကျုးလွန်​ဖို့ လိုင်​စင်​ရှိ​နေတုန်းပဲ ဆိုတာ ​တွေး​တော ဆင်​ခြင် ​နိုင်​တဲ့ လူတိုင်း သိနိုင်​ပါတယ်​။ တကယ်​တမ်း မှာ​တော့ တရား ဥပဒေအရ ပြစ်​ဒဏ်​​ပေးခြင်းမရှိဘဲ တရား လက်လွတ် သတ်ဖြတ်မှုဟာ မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ​ကောင်း​ကောင်းကြီးရှင်​သန်​​နေ တုန်းပါပဲ။
ကျင်းပနေ တဲ့ လွှတ်တော် အရပ်ရပ် ကို အောက် တိုဘာ ၃၁ ရက်က စပြီး ၁၀ ရက်ကြာ ရပ်နား လိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိပြည်သူ့ လွှတ်တော် မှာ ပီအာ လို့ခေါ်တဲ့ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ်နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဆွေးနွေးလက်စ ဖြစ်နေပြီး ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း ၄၀ ကျော် က ၀ိုင်းဆွေးနွေနေကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:56 AM No comments:
ကိုပါကြီး စက်တင် ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ ၁၁ နာရီ ၃၀ တွင် ဒီကေဘီအေ ကလို့ထူးဖေါ ဌာနမှ ကျိုက်မရော သို့ အဆင့်ဆင့် လာရောက်ခဲ့ သည်။
လာရောက်ရ သည့် အကြောင်းရင်း မှာ ရန်ကုန် ရှိ မြန်မာ့ငြိမ်း ချမ်းရေး စင်တာ တွင် ကျင်းပနေသော တိုင်းရင်းသားများ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံတော် အဆင့် အပစ် ခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ညှိနိုင်းနေသော အစည်းဝေး သို့ အလွတ်တမ်း သတင်းထောက် အနေဖြင့် သတင်း ယူရန် ခ၇ီးထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:47 PM No comments:
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နောက်ကြောင်းပြန်နိုင်သည့် လက္ခဏာ ကုလသတိပေး
မြန်မာနိုင်ငံက အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အလားအလာရှိတဲ့ နောက်ကြောင်း ပြန်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟေးလီက အထွေထွေ ညီလာခံမှာ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင် ၃ နှစ်ကျော် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ်ဟာ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေမှာ တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမယ့် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ရလဒ်တွေ၊ လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ဆောင်စရာတွေ လိုနေသေးတယ်လို့ ယန်ဟေးလီက ပြောပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:00 PM No comments:
တပ်မတော်ရဲ့ လွှတ်တော် ဖျက်သိမ်းရေး အကြံပြုခွင့် တောင်းဆိုမှု စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ဆီ ဦးတည်တာလား
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တို့ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါဝင် တဲ့ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး နဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ (ကာ/လုံ) ရဲ့တာဝန်တွေ မှာ “လွှတ်တော်တွေ ဖျက်သိမ်းဖို့ သင့်၊ မသင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကို အကြံပြု ရမယ်” ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ထည့်သွင်း ပေးအပ်ဖို့ တပ်မတော် သား လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေ က လွှတ်တော်ကို တင်ပြလာ တာမို့ ဒီတင်ပြ တောင်းဆိုမှုက အရင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆီကို ပြန်လည် ခြေဦး လှည့်ဖို့ ကြိုးစားလာတာလား ဆိုပြီးမေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါပြီ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:50 PM No comments:
ကိုပါကြီး နှင့် လူသတ်သော စစ်တပ်
(တူမောင်ညို) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၄
စစ်တပ်က သတ်လို့ သေရတဲ့အထဲမှာ “ကိုပါကြီး” က ပထမဆုံးမဟုတ်သလို၊ နောက်ဆုံးလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ မပြီးဆုံးသေး တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးထဲမှာ စစ်တပ်ကသတ်လို့ “ကိုပါကြီး”လို သေခဲ့ကြရသူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ “ကိုပါကြီး” က ယောက်ျား သားမို့ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းပြီး အသတ်ခံရတာပဲ။ “ကိုပါကြီး” နေရာမှာ မိန်းမသားတစ်ယောက်သာဆိုရင် မသေခင် မဖွယ်မရာအလုပ်ခံရ ဦးမှာသေချာတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အစောပိုင်းက ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာ စစ်တပ်က ဖမ်းထားတဲ့ ရွာသားကိုတောင် မဖွယ် မရာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတာမို့ စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်ယုတ်မာမှုတွေက ကမ်းကုန်အောင် ဆိုးဝါးရိုင်းစိုင်းပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:59 PM No comments:
စစ်ဆင်ရေးအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဘီလီယံသုံး
နေပြည်တော် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်၏ သုံးပုံတစ်ပုံဖြစ်သော ၃၂ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ စစ်ဆင်ရေးအသုံး စရိတ်အဖြစ် သုံးစွဲသည်ဟု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင် က ပြောသည်။
တပ်မတော်အသုံးစရိတ်တွင် လစာနှင့် စရိတ် ၄၆ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ စစ်ဆင်ရေး (တိုက်ခိုက်ရေး ကဏ္ဍပါဝင်မှု) ၃၂ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ၁၄ ဒသမ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ၂ ဒသမ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:57 PM No comments:
တပ်မတော်ကို အရေးယူရန် ပြည်တွင် ဆန္ဒပြ
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်း အလွတ်သတင်းထောက် ကိုပါကြီးကို တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးပြီးနောက် သေဆုံးမှုကို အရေးယူပေးရန် ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရှေ့တွင် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် ညပိုင်းက တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ တစ်ဦးနှင့် လူငယ်တစ်ဦးက ဖယောင်းတိုင်းမီးထွန်း ဆန္ဒပြသည်။
“ကိုပါကြီးကို စစ်အစိုးရက ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို သဘောထားဖော်ထုတ်တာပါ။ ပုဒ်မ ၂၀၁ အရ အလောင်းဖျောက်ဖျက်သူကော သတ်တဲ့သူကော ငါတို့သိချင်တယ်။ စုံစမ်းရမယ်။ စစ်ဆေးရမယ်။ ရဲကမဝင်ရဲဘူး” ဟု ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူ ဦးမြင့်အေးက ပြောသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 3:47 PM No comments:
ကိုပါကြီးနှင့် အရှက်ဟက်တက်ကွဲ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ
၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာအတွက် အရှက်ဟက်တက် ကွဲခဲ့လေပြီ။ အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲနှင့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ လာရောက်ကြမည့် ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲများက တစ်လပင် မလိုတော့သည့်အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်၌ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး လိုလားသူများက အစိုးရကို မနေ့က ဆန္ဒပြကြသည်၊ နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ တာဝန်သိသည့် တာဝန်ရှိသည့် အစိုးရတစ်ရပ်အတွက် အရှက်မဲ့စေခဲ့ပြီ၊ မပေးသဖြင့် မရသာဖြင့်သာ တောင်းဆိုရသည် မဟုတ်ပါလော။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:21 AM No comments:
အထက်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ဟုဆိုကာ ကိုပါကြီးသေဆုံးမှု အမှုဖွင့်ခွင့်မပေး
စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီး မှုကြောင့် နိုင်ငံရေးနောက်ခံရှိသူ အလွတ် သတင်းထောက် ကို အောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီး သေဆုံး ခဲ့မှုအပေါ် ကျိုက်မရောမြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဦးတင်ဦးက အမှုကို လ က် ခံခဲ့ခြင်းမရှိဟု သေဆုံးသူ ကိုပါကြီး၏ ဇနီးဖြစ်သူ မသန္တာက အောက်တိုဘာ ၂၆ရက်တွင် မဇ္ဈိမ ကို ပြောသည်။
ကိုပါကြီးအား ဖမ်ဆီးမှုတွင် ပါဝင်သည့်အပြင် သေဆုံးမှုတွင် တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည့် မွန်ပြည်နယ်၂၀၈တပ်ရင်းဗိုလ်ကြီးစန်းမင်းအောင်ကိုအလောင်းဖျောက်ဖျက် မှု၊ ညှင်းပမ်းသတ်ဖြတ်မှု၊ မတရားဖမ်းဆီးမှုတို့ဖြင့် အမှုဖွင့် ပေးရန် တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း အထက်ညွှန်ကြားချက်ကြောင်ဟုဆိုကာအမှုကိုဖွင့်မပေးနိုင်ကြောင်း စခန်းမှူး က ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု မသန္တာက ဆိုသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:20 AM No comments:
“၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေက တောထဲက တောရိုင်းဥပဒေနဲ့ တူနေပါတယ်”
စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးနောက်ခံရှိသူ အလွတ်သတင်းထောက် ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီး သေဆုံးခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်အပေါ် အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရန် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၄၀ ကျော်က အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ကုလတပ်ဖွဲ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ပါဝင်ရေးညှိနှိုင်းနေ
ြဲမန်မာ့တပ်မတော်သည် ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့တွင် ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဟု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးဝေလွင် က ပြောသည်။
၎င်းက “အဲဒါက ညှိနှိုင်းတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ” ဟု ပြောသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:19 AM No comments:
ယနေ့ တပ်မတော်သည် မည်သူ့ဘက် လိုက်မည်နည်း
ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်ထုတ် သတင်းစာများတွင် တပ်မတော်က ၄၃၆ မပြင်လိုကြောင်း သဘောထားပေးသည့် အစီရင်ခံစာကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှု ကော်မတီက တင်သွင်းလိုက်ကြောင်း သတင်းကို ဖတ်ရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:27 AM No comments:
စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှုများ မှတ်တမ်းပြုစုမည်
စစ် အစိုးရ အုပ်ချုပ် သည့် ကာလ အတွင်း လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများ ကို စုံစမ်းဖော် ထုတ်၍ မှတ်တမ်းတင် မည်ဟု ညီညွတ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (UNDO) က ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်။
NLD ပါတီ ပြင်ပရောက် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများဖြင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်း ထားသော UNDO က ရန်ကုန်မြို့ ယုဒသန် ခန်းမတွင်အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်က ပြုလုပ်သော ပြည်နယ် တိုင်းလေးခု၏ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းသည့် အခမ်းအနား တွင် ထိုသို့ကြေညာ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:26 AM No comments:
စစ်တပ်သတင်း ထုတ်ပြန်ရေး ဗိုလ်ချုပ် ၃ ဦးကို ကာချုပ်တာဝန်ပေး
တပ်မတော် ကာ ကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က မြန်မာ့ တပ်မတော် ၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ရေး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက် ရန် ဗိုလ်ချုပ် ၃ ဦး ကို တာဝန်ပေး လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ကာချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သော တပ်မတော် အရာရှိ ၇ ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ
(ယာယီ) မှ အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးတို့ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် ယင်းသို့ ဗိုလ်ချုပ် ၃ ဦးကို သတင်းထုတ်ပြန်ရေး တာဝန်ပေးအပ်ထားသည်ဟု ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်က ပြောဆိုကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:20 PM No comments:
ရှေ့ဆက် မတိုးတော့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နောက်ကွယ်မှာ ဦးသန်းရွှေ ရှိနေသလား
“ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး” လုပ်မယ် လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အာဏာရ ယူပြီး ၃ နှစ်ကျော်ကြာ မြင့်လာ တဲ့ အချိန် မှာတော့ မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး က ရှေ့ဆက် မတိုးနိုင်တော့ ဘဲ ရပ်တန့် သွားတာမို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဦးသန်းရွှေရဲ့ သြဇာ လွှမ်းမိုးမှု ဆက်လက်ရှိနေဆဲလား ဆိုပြီး မေးခွန်း ထုတ်မှု တွေရှိလာပါ တယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:18 PM No comments:
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က အကျဉ်းသား ၃၀၇၃ ဦးကို အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ တွင် ပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်း ခွင့်ပြုလိုက်ရာ ယင်းပြစ်ဒဏ် လွတ်ငြိမ်းခွင့် တွင် စစ်ထောက် လှမ်းရေးခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းဆွေ အပါအ၀င် စစ်ထောက်လှမ်းရေး ၈ ဦး ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာကြောင်း နေပြည်တော် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
သမ္မတ၏ ပြစ်ဒဏ် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ ၈ ဦးမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဟောင်းဦးသိန်းဆွေ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဦးတင်လှ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဦးမိုးသူ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဦးအောင်ဇော်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဦးမောင်မောင်သန်း၊ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဦးမြင့်ဦး ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွှန့်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးဟောင်းဦးနိုင်ဌေးနှင့် ဦးခင်ညွှန့်၏ သမက်ဖြစ်သူ ဦးတင်ထွဋ်တို့ ပါဝင်သည်ဟု သိရှိရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:10 PM No comments:
သမ္မတဗိုလ်သိန်းစိန် မျှားခေါ်တဲ့ “၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် တိုင်းရင်းသားတွေကြောင့်”ဆိုတဲ့ ထောင်ချောက်လိုလို၊ ရာဇသံလိုလို -
သမ္မတ ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့အောက်တိုဘာလ ရေဒီယိုစကားမှာ အပစ်ရပ်စာချုပ်ကို အစောတလျင်စွာ လက်မှတ်ထိုးနိုင်မှ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်၊
ဒီအခြေအနေကမှ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတွေ ရရှိပြီး လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်ချောမွေ့ စွာ ကျင်းပနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်၂၀၀၈ ခြေမန်းကွင်းနဲ့ အတုပ်အနှောင်ခံထားရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကြားမှာ အလုပ်အကိုင်မဲ့လမ်းဘေးရောက်သွားတော့မလားဟ ဆိုပြီး သောကပွား ဗျာများသွားခဲ့ကြတယ်။
စစ်အာဏာရှင် မဆလ ဗိုလ်နေ၀င်းခေတ်၊ ငြိမ်/ပိ ဗိုလ်စောမောင်နဲ့ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ နအဖခေတ် ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့တုန်းက အခုလောက် သေနတ်သံ ဗုံးသံတွေတိတ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဆိုတာကြံ့ဖွံ့ သမ္မတဗိုလ်သိန်းစိန် ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:45 AM No comments:
ဆောင်းပါးရှင် - ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်း2October 2014
စကား.. စကား ပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြ၊ နှုတ်တစ်ရာစာတစ်လုံး ဟူသော စကားများကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိသည်။ တိုင်းပြည်၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ၊ အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဒုတိယမြောက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးနေသည့်ကာလတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ် နိုင်ငံရေးဇာတိရုပ်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေမည့် မိန့်ခွန်းကို မိန့်ကြားခဲ့သည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ကို ထုတ်လွှင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သမ္မတ၏ လစဉ်ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းဖြစ်သော်လည်း ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (အင်န်စီစီတီ) တို့အကြား တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲနိုင်ရေး သဘောတူစာချုပ်မူကြမ်းအပေါ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ သောင်မတင်ရေမကျဖြစ်နေပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် နယ်မြေအချို့တွင် သေနတ်သံ၊ ဗုံးသံများ ကွက်ကျားမိုးရွာနေသည့်ကာလနှင့် အချိန်ကိုက်နေသော မိန့်ခွန်းဖြစ်သည့်အလျောက် အလေးအနက်ထား နားထောင်ခဲ့သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:44 AM No comments:
အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် တပ်မတော်သားအမှု ဒီနေ့ ရုံးထုတ်
ရှမ်းပြည်မြောက် ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ထဲမှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ် တဦးကို အဓမ္မပြုကျင်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ တပ်မတော် သား တဦး ကို မူဆယ်ခရိုင် တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် နန့်ကွတ်ကျေး ရွာမှာ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် ကို နယ်မြေခံတပ်ရင်းက တပ်သားကောင်း ဘိုဘို ဆိုသူက မေလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ အဓမ္မပြုကျင့်တယ်လို့ စွဲထားတဲ့အမှု ဖြစ်ပါတယ်။
မုဒိမ်းမှုအပြင် ကလေးအရွယ်ကို အုပ်ထိန်းသူအောက် ခိုးယူတဲ့ လူခိုးမှုနဲ့ပါ တရားလိုတွေဘက်က စွဲဆိုထားတာပါ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:01 PM No comments:
တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်း ရာထူးတချို့ အပြောင်းအလဲ လုပ်
မြန်မာ့တပ်မတော် အတွင်း ထိပ်ပိုင်းရာထူးနေရာ အပြောင်းအလဲများ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး အပါအ၀င် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အဆင့် တပ်မတော် အရာရှိတချို့ကို ရာထူး တာ ၀န် ပြောင်းရွှေ့မှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း သတင်းရှိရသည်။
စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအရာချုပ် (စရဖ) အဖြစ် ခန့် အပ် လိုက်သည့်အပြင် စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး ကစထ (၆ ) နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း၊ ယခင် စစ်ဘက် ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအရာချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ ကို စစ်ဦးစီးအရာချုပ် (ကြည်း) တာဝန်ယူရန် ပြောင်းရွှေ့ လိုက်ပြီး စစ်ဆင်ရေး အထူး အဖွဲ့မှူး (ကစထ ၅) ကိုပါ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:06 AM No comments:
ပြီးခဲ့သော ဆောင်းပါး တွင် ဦးကျော်ငြိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်နေ၀င်း ၏ တုံ့ပြန်ဝေဖန် ချက်များကို တင်ပြခဲ့ ပါသည်။ ဦးသန်း(ကိုသန်း- ကြည့်မြင်တိုင်) အပါ အ၀င် ဆိုရှယ်လစ် ပါတီ လူဟောင်းများ ဘက်ကမူ ဗိုလ်နေ၀င်း အပေါ် စစ်ရေး နိုင်ငံရေးအရ လုံးဝ အထင် မကြီးသော ဝေဖန်စကားများ ကိုသာ စာရေးသူကြားခဲ့ဘူးပြီး ဖဆပလနှင့် ဆိုရှယ်လစ် အုပ်စုမှ စစ်ရေး နိုင်ငံရေး တွင် အမှန်တကယ် တန် ဘိုး ထားသော စစ်ရေး နိုင်ငံရေး အနာ ဂတ်ခေါင်းဆောင် ဖြစ် လာနိုင်သူမှာ ဗိုလ်မောင်မောင် သာဖြစ်ကြောင်း လေ့လာ သိရှိရပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:47 AM No comments:
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သစ် အဖြစ်ရေပန်း စားနေသည့် ဗိုလ်ချုပ်မြထွန်းဦးကို ဇွန်လနှောင်းပိုင်းတွင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့် ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ပြီး တပ်မတော်တွင် လက်ရှိ နံပါတ် ၄ အဆင့်ရှိ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တဦး ဖြစ်လာကြောင်း စစ်ဘက် သတင်းရပ်ကွက်မှ သိရှိရသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးသည် စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် ၂၅ ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စစ်ဦးစီးအရာရှိ ချုပ်(ကြည်း) အဖြစ် ခန့်အပ်ခံထားရသူဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ သဘောကျခဲ့ သည့် မျိုးဆက်သစ် တပ်မတော်အရာရှိ တဦးဖြစ်ကာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ကို လေးစားရိုသေသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:32 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတအဖြစ် သူတို့ မမြင်လိုတော့ပြီလား
မြန်မာ အစိုးရနှင့် လှိုက်လှဲနွေးထွေးသော ဆက်ဆံရေး ထူထောင် ရရှိပြီးသည့် ယခု အချိန် တွင် အနောက်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်နှင့် ဆက်သွယ် မှုများ ပြန်လည် ထူထောင်ရန် သင့်မသင့် ကို ဂရုတစိုက် ဆင်ခြင် သုံးသပ်နေကြ ပြီဖြစ်သည်။
အမေရိကန် စစ်တပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြန်မာအရာရှိများကြား တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် အစည်းအဝေးပွဲ များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန် နိုင်ငံကလည်း မြန်မာစစ်တပ်ကို လူ့အခွင့်အရေး သင်တန်းပေးခဲ့သည်။ ဩစတြေးလျကလည်း ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များတွင် မြန်မာစစ်သား များ ပါဝင်လာနိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေ များ ရှာဖွေမည်ဟု ပြောသည်။ ယခုမှ အခြေတည်လာသည့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ဝေဖန်သူများလည်း ရှိနေပြီး Burma Campaign UK က မြန်မာစစ်တပ်သည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက် ရက်စက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိနေကြောင်း အထူး သဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ နေထိုင်သည့် ဒေသများတွင်ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆိုသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:57 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း – ၅)
ကျနော် ဖော်ပြခဲ့သော အချက်အလက်များအရ ယုတ်မာရက်စက်သော အကျင့်စရိုက်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြသူများသည် ပြည်ပက လာသူများသာမဟုတ်ဘဲ ပြည်တွင်းက ဇာတ်တူသား စားသူများက အဓိက ဖြစ်သည်ကို ပညာသတိရှိသူများ သိနိုင်လောက်ပြီ ထင်ပါသည်။ နွားကွဲလျှင် ကျားဆွဲခံရသည်မှာ ဓမ္မတာဖြစ်ရာ ပြည်တွင်းမညီညွတ်လျှင် ပြည်ပသားဝံပုလွေတွေကလည်း ပါဝင်လာကြတော့မည်မှာ သဘာဝကျပါသည်။ သို့သော် ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံတော်ဟု အမည်ခံထိုက်သူပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်နေနိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှု ဖြစ်နေသဖြင့် နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု ဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်း ပေါ်ထွက်ရေးမှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်မလာသေးခြင်းသည် ထူး၍မဆန်းသောအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:29 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း – ၄)
ကွန်မြူနစ် သခင်ဗဟိန်းအား တပ်မတော်ကို ဦးစီးခေါင်းဆောင်နေရာပေးရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လျှို့ဝှက်စီစဉ်ခဲ့ပုံကို ဆိုရှယ်လစ်များ သိသွားဟန်ရှိသည်ဟု ဗိုလ်ကျော်ဇောက ၄င်း၏ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် (စာမျက်နှာ ၁၁၉) တွင် ဗိုလ်အောင်ကြီး၏ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကာလ ဦးနေ၀င်းထံပေးစာများကို ရည်ညွှန်း ကောက်ချက်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:41 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း – ၃)
ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၏ လျှို့ဝှက် စစ်ရေး ခေါင်းဆောင် စောရန်နောင်သည် ဖော်ကောင် ဘညွှန့်ကို အမှီပြု၍ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လတွင်ကျမှ ဦးစောထံ ရောက်ရှိ လာသူ ဖြစ်သည်။ ဦးစော လန်ဒန်တွင် အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်ကို သဘောမတူဘဲ လက်မှတ် ထိုးရန် ငြင်းပယ်၍ ဦးအောင်ဆန်းကို ဆန့်ကျင်မှု ပြုခဲ့ပြီး ချိန်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ဦးစော မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်သည့် အချိန်တွင်လည်း ဦးအောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော ဘုရင်ခံကောင်စီမှ ဦးစော အထွက်ပြချိန်တွင် အချိန်ကိုက်၍ စောရန်နောင်သည် ဦးစောထံ ၀င်ရောက် လာခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန် မတိုင်မှီအထိ လွန်ခဲ့သော ၅ လ (၁၉၄၆ စက်တင်ဘာလ ၂၁ရက်) က ဦးစောအား လုပ်ကြံ သူကို ဦးစောကိုယ်တိုင် အဖြေ မထုတ်နိုင် သေးပါ။ ဖော်ကောင် ဘညွှန့်နှင့်အတူ ပါလာသော စောရန်နောင်က “ဦးစောအား လုပ်ကြံသူ များသည် ဦးအောင်ဆန်း၏ လူများဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့အား ပြန်လည် လုပ်ကြံ တိုက်ခိုက်ရမည်” ဟူသော သွေးထိုး စကားဖြင့် ၀င်ရောက် လာသည့် အချိန်ကစ၍ ဦးစော စိတ်ပြောင်း သွားခဲ့ပုံ ရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:07 AM No comments:
နေပြီတော်အစိုးရနောက်မှ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖေါ်လိုက်ပြီ
စာဖတ်သူများ မှတ်တမ်းအဖြစ် သိမ်းယူထားနိုင်အောင် ရည်ရွယ်၍ အသေးစိတ် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး နေပြည်တော် တည်ဆောက်မှုသည် ပြည်သူများအတွက် ဒီမိုကရေစီ အဆောက်ဦးတခု အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေခံထားပါသည်
2010 ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ နေ့တွင် မြန်မာပြည်သို့ အလည်ပတ်ရောက်၇ှိလာသော လာအိုဒီမိုကရစ်တစ်သမ္မတ နိုင်ငံမှ ၀န်ကြီးချုပ် Bouasone Bouphavanh ဘိုဆွန်ဘိုဟာဗန်းက နေ့လည် ၁၀- နာရီ မိနစ် ၄၀ မှာ နေပြည်တော် လေဆိပ်ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လာအိုဝန်ကြီးချုပ်မှာ သူ၏ ဆိုက်ရောက်လာသော နေပြည်တော် လေယာဉ်ကွင်းတွင် လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းရန် လေယာဉ်မှ ထွက်လိုက်သည်နှင့် သူမျှော်လင့်ထားသလို စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှ သူ့အား ခန့်ငြားထည်ဝါစွာ ဆီးကြိုနေသော မြင်ကွင်းတခုမဟုတ်ရလေပဲ လာအိုနိုင်ငံ၏ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော ထိုင်းနိုင်ငံ ဒေသ တောနယ်သူများ ၀တ်ဆင်လေ့ရှိသော ရိုးရာဝတ်စုံများဖြင့် စောင့်ကြိုနေကြသော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် အခြားသော တောသူများဝတ်ဆင်လေ့၇ှိသော အ၀တ်စားများဖြင့် သူအားကြိုဆိုနေသည်မို့ အံ့သြမှင်သက်မှုပင် ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သူ၏ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ ထုတ်ပြန်သော သံတမန်ခရီးစဉ်နှင့် အတွေ့ကြုံများ မှတ်တမ်းတွင် ရေးသားထားလေသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:03 PM No comments:
ဂါမဏိ၊ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၄
မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အာဏာနီ တည်ဆောက်ရေး လို့ ခေါင်းစဉ်တပ် ထားပေမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်း ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘဲ ဗမာပြည်က စစ်အာဏာရှင် စနစ်ရဲ့ ပကတိ အခြေအနေကို ပြောနေတာကို သဘောပေါက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ၈၈ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် စောမောင် ပြောခဲ့ဖူးသလို မာရှယ်လော ဆိုတာ အကြီးဆုံးဗိုလ်ချုပ် လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ ရတယ် ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း စစ်အာဏာရှင်တွေမှာ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ မရှိဘဲ တဦးတယောက်တည်းရဲ့ သဘောထားတွေ လုပ်ရပ်တွေကသာ အဓိကဖြစ်နေတဲ့အတွက် လက်ရှိကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်ကို သုံးသပ်ဖွင့်ချရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:26 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း – ၂)
“စောရန်နောင်ကို အရှင်ဖမ်းမိလျှင် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်လုပ်ကြံခံရမှု ဘယ်လို ဆက်စပ်နေတယ်ဆို တာ ပေါ်မှာပဲဆိုပြီး တို့ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေကလည်း ဒီကောင့်ကို လိုက်ရှာတာဘဲ၊ မတွေ့ဘူး။ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဂိုဏ်းသား ပဲခူးဗိုလ်ကြာညွှန့်နဲ့ ဗိုလ်တင်အောင် (မြေပဒေသာစီမံကိန်း အထူးအရာရှိ၊ မာဇဒါဂျစ် ကားမှောက်၍ သေဆုံးသွားသဖြင့် မာဇဒါဂျစ်တင်အောင် ဟုခေါ်သူ) တို့က ပဲခူးဘက်မှာ စောရန်နောင်ကို အလျင် လက်ဦးစွာ ဖမ်းမိ၍ ချုပ်နှောင်ခေါ်ဆောင်လာစဉ် ကားပေါ်မှ ထပ်မံထွက်ပြေးပြန်သဖြင့် ပဲခူး ဆယ်မိုင်ကုန်းထိပ်တွင် ပစ်သတ်လိုက်ရပါသည်ဟူသော ဇာတ်လမ်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်သွားတယ်ကွာ။ ငါ ဒီဇာတ်လမ်းကို မယုံဘူး။ အမေရိကန်သမ္မတ ကနေဒီကို လုပ်ကြံတဲ့ အော့ဇ်ဝဲလ်ဆိုတဲ့ တရားခံကို ကနေဒီအတွက် နာကျည်းဒေါသထွက်နေသူက ထပ်မံသတ်လိုက်သည်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါပဲကွာ။ နောက်မှ စဉ်းစားကြည့်တော့ ဦးစောကို မထိတထိ သွားလုပ်ကြံယောင်ဆောင်တဲ့ ရန်ကုန်ဘဆွေလည်း ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက EC တယောက်ဖြစ်နေပြီး ငါတို့ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့က ကားကို မလိမ့်တပတ်နဲ့ ယူ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ တို့ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေ အားလုံး ဆိုရှယ်လစ်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးဆင်ကွက်ထဲမှာ စတေးခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လိုမှ ရှင်းလို့မရဘူးကွာ” ဟု ဗိုလ်စက်ရောင်က ဆက်ပြောပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:18 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း – ၁)
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက် စနေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်ဝန်းကျင်မှာ ရန်ကုန်မြို့ အတွင်းဝန်များရုံး အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ လုပ်ကြံခံရစဉ်အချိန်က ဤစာရေးသူသည် လသားခန့်အရွယ်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရာသမား လူကြီးများ၏ တဆင့်ပြောကြားချက်၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် သတင်းစာဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုလေ့လာချက်အရသာ ဤနိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးအကြောင်းကို သိရှိခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကြံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများလည်း ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀က ကြားခဲ့ဘူးသည်များလည်း ရှိခဲ့ပါ၏။ ဗိုလ်ချုပ်သည် ယနေ့တိုင်မသေသေးဟုပင် အလွန် နားထောင်ကောင်းလှသော ပါးစပ်ရာဇ၀င်များဖြင့် လူကြီးသူမများက စာရေးသူတို့ငယ်စဉ်တွင် ပုံပြင်သဖွယ် ပြောဆိုသည်ကိုလည်း ကြုံခဲ့ဘူးပါ၏။
ထိုင်းဘုရင့်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို သားအဖြစ် မွေးစားဟု စင်ကာပူ သတင်းစာ ဖော်ပြ
အငြိမ်းစား ယူပြီးနောက် သမ္မတ ရာထူးရ ယူ လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြ တဲ့ လက်ရှိ ကာ ကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကို ထိုင်းစစ်ဦး ချုပ်ဟောင်း Prem Tinsulanonda က သားအဖြစ် မွေးစားတယ် လို့ စင်ကာပူအခြေစိုက် The Straits Times သတင်းစာ က ဖော်ပြပါ တယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့ လက်ရှိ ထိုင်းဘုရင့်ကောင်စီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Prem Tinsulanonda က မွေးစားသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မွေးစားခြင်းဟာ ခေါင်းကိုင်ဖခင်နဲ့ ခေါင်းကိုင်သားတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Prem Tinsulanonda နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ ဖခင်များဟာ ယခင် သက်ဆိုင်ရာ စစ်တပ်များ အသီးသီးမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြစဉ်က သိကျွမ်းခဲ့ကြကြောင်း ဖော်ပြထားသော်လည်း ဧရာဝတီက သီးခြား အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:55 AM No comments:
ကိုးကန့် တရုတ် စစ်ဘုရင်နှင့် ဘိန်းဘုရင် တဦး ဖြစ်သော လော်စစ်ဟန် မူးယစ်ဆေးမှ ရရှိသည့် ငွေများဖြင့် တည်ထောင် ထားသော အေးရှားဝေါလ် လုပ်ငန်းစုပိုင် လှည်းတန်း စင်တာတွင် ဥရောပသမဂ္ဂရုံး ဖွင့်လှစ်ခြင်းသည် အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အာဏာ ရှင်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ် ကြီးနေ၀င်း တချိန် က နေထိုင်ခဲ့ သည့် အေဒီလမ်း (ယခု မေခလမ်း) သည် မြန်မာနိုင် ငံတော် သမိုင်း မှ အတက်အကျ များကို မျက်ဝါး ထင်ထင်မြင်ခဲ့ရသည်။ သူအုပ်စိုးစဉ် က အထက်တန်းကျ၍ သစ်ပင်ကြီးများ စိမ်းစိုဖုံးလွှမ်းနေ သည့် အိမ်ရာ များ တည်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့ ၏ နာမည်ကြီး အင်းလျားကန် အနီးမှ လမ်း သည် အစောင့်အကြပ် ထူထပ်ပြီး စစ်သားများက မည်သည့် ဧည့်သည် ကိုမျှ ၀င်ရောက် ခွင့်ပြုခဲ့သည် မဟုတ်ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းအာဏာ စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ သည့်နောက် ထိုနေရာ၏ ကျော်ကြားမှု၊ ဆွဲဆောင်မှု ပျောက်ဆုံး ခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ၀င်ထွက်သွားလာရေး ကို ဆက်လက်၍ တင်းကျပ် ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ အချိန်တွင် ပင် “ရပ်” ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ် တခုနှင့် ရဲအဖွဲ့ စစ်ဆေးရေး ဂိတ် ဖြင့် ပိတ်ဆို့ထား သည်။ အာဏာရှင်ဟောင်း ၏ ဆွေမျိုးများနှင့် သမီးများ ဆက် လက် နေထိုင်ကြပြီး အေဒီလမ်း အတွင်းမှ အိမ် ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု အမြောက် အများကို ပိုင်ဆိုင်ထား ကြ သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 3:36 PM No comments:
အင်အားကြီး နိုင်ငံများ၏ ဖိအားပေး ဆက်ဆံမှု လက်မခံဟု ...
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး NLD နဲ့ စစ်တပ်အမတ်တွေ လွှတ်တေ...
နိုင်ငံတော် လူဆိုးတွေကို အတိုက်ခံဘက်က ချော့ပြီးပေါ...
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မထားရန် လွှ...
ဦးအောင်သောင်းအား အမေရိကန် အစိုးရက နာမည်ပျက်စာရင်း...
ဦးအောင်သောင်းကိစ္စ NLD လက်ချက် မကင်းဟု ကြံ့ခိုင်ရေ...
နိုင်ငံ့အရေး ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့န...
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နောက်ကြောင်းပြန်နိုင်သည့် လက္ခဏ...
တပ်မတော်ရဲ့ လွှတ်တော် ဖျက်သိမ်းရေး အကြံပြုခွင့် တော...
အထက်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ဟုဆိုကာ ကိုပါကြီးသေဆုံးမှု အ...
စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှုများ မှတ်တမ်ြး...
စစ်တပ်သတင်း ထုတ်ပြန်ရေး ဗိုလ်ချုပ် ၃ ဦးကို ကာချုပ...
ရှေ့ဆက် မတိုးတော့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နောက်ကွယ်...
သမ္မတဗိုလ်သိန်းစိန် မျှားခေါ်တဲ့ “၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမ...
အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် တပ်မတော်သားအ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတအဖြစ် သူတို့ မမြင်လိုတော...
နေပြီတော်အစိုးရနောက်မှ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖေါ်လိ...